GỤỌ NKE Albanian Amharic Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French Georgian German Hiligaynon Hungarian Igbo Indonesian Italian Japanese Kirghiz Korean Lithuanian Malayalam Myanmar Norwegian Polish Portuguese Rarotongan Romanian Russian Samoan Sepedi Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Thai Turkish Ukrainian Urdu
Ọtụtụ ndị kweere na di ma ọ bụ nwunye ekwesịghị inwe onye ọzọ ya na ya na-enwe mmekọahụ. Nke a dabara n’ihe Baịbụl kwuru, sị: “Ka alụmdi na nwunye bụrụ ihe kwesịrị nsọpụrụ n’etiti mmadụ niile, ka ihe ndina alụmdi na nwunye gharakwa ịbụ ihe e merụrụ emerụ.”—Ndị Hibru 13:4.
IHE ga-eme ka e kwuo na di ma ọ bụ nwunye anaghị agba n’èzí ọ̀ bụ naanị mgbe ya na nwaanyị ọzọ ma ọ bụ nwoke ọzọ na-adịghị enwe mmekọahụ? Oleekwanụ maka di ma ọ bụ nwunye ịnọ na-eche obi ụtọ ọ ga-enwe ma ya na onye ọzọ nwee mmekọahụ? È nwere ike iwere na di ma ọ bụ nwunye nke nwere nwaanyị ma ọ bụ nwoke ọzọ ya na ya na-akpachi anya dị ka onye na-agba n’èzí?
Ọ̀ Dị Njọ Iche Obi Ụtọ Ị Ga-enwe Ma Gị na Onye Ọzọ Nwee Mmekọahụ?
Baịbụl kwuru na mmekọahụ bụ ihe dị mma Chineke mere maka di na nwunye, nke na-enyekwa ha abụọ ọṅụ na afọ ojuju. (Ilu 5:18, 19) Ma, ọtụtụ ndị ọkachamara nke oge a na-ekwu na o nweghị ihe o mere, nakwa na ọ bụdị ihe ahụ́ mmadụ chọrọ ma ọ bụrụ na di ma ọ bụ nwunye enwee onye ọzọ ọ na-adị na-eche obi ụtọ ọ ga-enwe ma ya na ya nwee mmekọahụ. Mmadụ iche ụdị ihe a ọ̀ dị mma ma ọ bụrụhaala na onye ahụ emeghị ya eme?
Ihe na-adịkarị onye na-eche ụdị ihe a mkpa bụ igbo naanị agụụ nke onwe ya. Ndụmọdụ Baịbụl nyere ndị di na nwunye katọrọ mmadụ iche naanị maka ọdịmma onwe ya. Okwu Chineke kwuru banyere inwe mmekọahụ, sị: “Ọ bụghị nwunye na-achị ahụ́ ya, kama ọ bụ di ya; otú ahụkwa, ọ bụghị di na-achị ahụ́ ya, kama ọ bụ nwunye ya.” (1 Ndị Kọrịnt 7:4) Ime ihe Baịbụl kwuru ga-eme ka mmadụ ghara iwere mmekọahụ dị ka ihe e ji egbo agụụ mmekọahụ ndị onye ahụ malitere inwe mgbe ọ na-eche ebe ya na onye ọzọ na-enwe mmekọahụ. Ọ bụrụ na di na nwunye na-ezere ụdị ihe a, ha ga-enwekwu obi ụtọ.—Ọrụ 20:35; Ndị Filipaị 2:4.
Ọ bụrụ na mmadụ ana-eche obi ụtọ ọ ga-enwe ma ya na onye na-abụghị di ma ọ bụ nwunye ya nwee mmekọahụ, ihe ọ na-eme bụ iche ihe ga-agbawa di ma ọ bụ nwunye ya obi ma o mechaa mee ya. Mmadụ iche ụdị ihe a, ò nwere ike ime ka onye ahụ na onye na-abụghị di ma ọ bụ nwunye ya kwaa iko? À na-ajụkwa ajụ? Baịbụl kọwara otú ihe mmadụ na-eche si agbasa ihe ọ na-eme, mgbe ọ sịrị: “A na-anwa onye ọ bụla mgbe ọchịchọ nke aka ya rapụtara ya wee rafuo ya. Mgbe ọchịchọ ahụ tụụrụ ime, ọ na-amụpụta mmehie.”—Jems 1:14, 15.
Jizọs sịrị: “Ana m asị unu na onye ọ bụla nke na-ele nwaanyị anya, o wee gụọ ya agụụ ka ya na ya nwee mmekọahụ, ọ kwasowo ya iko n’obi ya.” (Matiu 5:28) Ọ bụrụ na i zere ichewe otú gị na onye na-abụghị di ma ọ bụ nwunye gị ga-esi enwe mmekọahụ, ‘ị ga-echebe obi gị” meekwa ka gị na di ma ọ bụ nwunye gị nọgide na-ebi nke ọma.—Ilu 4:23.
Ihe Mere Obi Gị Ga-eji Dịrị Naanị n’Ebe Di ma Ọ Bụ Nwunye Gị Nọ
Di na nwunye ga na-ebi nke ọma ma ọ bụrụ na ha ‘anaghị ekwe’ ka onye ọzọ bata. (Abụ Sọlọmọn 8:6; Ilu 5:15-18) Gịnị ka nke a pụtara? Ọ bụ eziokwu na i nwere ike inwe nwoke ma ọ bụ nwaanyị ọzọ gị na ya dị ná mma, ma, ọ bụ di ma ọ bụ nwunye gị ka ị ga-akacha na-enye oge gị, na-ekwunyere okwu, ma na-akọrọ otú obi dị gị. E nwee onye ọzọ ị na-enye ihe ruuru naanị di ma ọ bụ nwunye gị, ihe ọ pụtara bụ na ị na-agba n’èzí, ọ sọgodị ya ya bụrụ na gị na onye ahụ enweghị mmekọahụ. *
Olee otú o si ebido? O nwere ike ịdị gị ka nwoke na-abụghị di gị ma ọ bụ nwaanyị na-abụghị nwunye gị ọ́ mara mma ma ọ bụ nwee obi ebere karịa di ma ọ bụ nwunye gị. Ọ bụrụ na gị na onye ahụ na-anọkarị n’ebe ị na-arụ ọrụ ma ọ bụ ná nnọkọ ọhaneze, o nwere ike ime ka gị na ya kpawa ihe ndị na-eme ná ndụ unu, gị amalite ịkọrọ ya nsogbu ndị gị na di ma ọ bụ nwunye gị na-enwe. I nweziri ike na-akọrọ ya ihe na-enye gị nsogbu n’obi, yanwa ana-agwa gị okwu ga-emeda gị obi. Mmadụ nwere ike isi ná nkata ya na onye ọzọ na-akpa ihu na ihu, n’ekwe ntị, ma ọ bụ na kọmputa, kọọrọ onye ahụ ihe kwesịrị ịdịrị naanị ya na di ma ọ bụ nwunye ya. Ọ bụghị ihe ọjọọ ma di ma ọ bụ nwunye buru n’obi na e nwere okwu ndị dịịrị naanị ha abụọ, nakwa na onye ọzọ ekwesịghị ịnụ “okwu nzuzo” ha.—Ilu 25:9.
Kpachara anya ka ị ghara ịsị na ị naghị anwụrụ onye na-abụghị di ma ọ bụ nwunye gị ebe ọ bụkwanụ na ị na-anwụrụ ya! Jeremaya 17:9 kwuru na ‘obi dị aghụghọ.’ Ọ bụrụ na gị na onye na-abụghị di ma ọ bụ nwunye gị na-akpachi anya, jụọ onwe gị, sị: ‘Àna m agọ na o nweghị ihe na-aga n’etiti mụ na onye ahụ ma ọ bụkwanụ mụ na ya ezoro ezo na-akpa? Obi ọ̀ ga-eru m ala ma di ma ọ bụ nwunye m nụpere ụdị nkata mụ na onye ahụ na-akpa? Olee otú obi ga-adị m ma di m ma ọ bụ nwunye m na nwoke ọzọ ma ọ bụ nwaanyị ọzọ na-akpa otú ahụ mụ na onye ahụ si akpa?’—Matiu 7:12.
Di na nwunye nwere ike itisa ma ọ bụrụ na otu onye n’ime ha enwee onye ọzọ ọ na-akọrọ otú obi dị ya, n’ihi na o nwere ike isi n’ịkọrọ ya otú obi dị ya ya na ya enwezie mmekọahụ. Dị ka Jizọs dọrọ aka ná ntị, “n’obi ka . . . ịkwa iko nke di ma ọ bụ nwunye, . . . si apụta.” (Matiu 15:19) Ma, ọ bụrụgodị na di ma ọ bụ nwunye akwaghị iko, ọ ga-esi ezigbo ike tupu di ma ọ bụ nwunye nke aka ya dị ọcha atụkwasịwa onye nke aka ya na-adịghị ọcha obi otú ọ tụkwasiburu ya. Otu nwaanyị a lụ alụ bụ́ Karen * sịrị: “Mgbe m chọpụtara na Mark na-ezo ezo akpọ nwaanyị ọzọ na fon ugboro ugboro n’ụbọchị, nke ahụ gbawara m obi. O siiri m ike ikweta na ha anaghị enwe mmekọahụ. Amaghị m ma m nwere ike ịtụkwasị ya obi ọzọ.”
Gị na nwoke na-abụghị di gị ma ọ bụ nwaanyị na-abụghị nwunye gị adịfela ná mma ókè. E nwee ka obi gị si dịwa n’ebe onye ọzọ nọ, agbala nkịtị ma ọ bụ na-agwa onwe gị na ọ dịghị ihe o mere. Ọ bụrụ na ọ dị gị ka ò nwere otú adịm ná mma gị na onye ọzọ nwere ike isi butere gị na di ma ọ bụ nwunye gị nsogbu, mee ihe banyere ya ozugbo ma ọ bụ gị na onye ahụ kwụsịchaa ịkpa. Baịbụl sịrị: “Onye maara ihe bụ onye hụrụ ọdachi gaa zoo.”—Ilu 22:3.
Ekwela Ka Ihe Ọ Bụla Tisaa Unu
Onye kere anyị bu n’obi na di na nwunye kwesịrị ịdị ná mma karịa otú mmadụ abụọ ọ bụla ọzọ nwere ike ịdịru ná mma. O kwuru na di na nwunye “ga-aghọkwa otu anụ ahụ́.” (Jenesis 2:24) Ihe mere ha abụọ ji bụrụ otu anụ ahụ́ abụghị naanị ka ha na-enwe mmekọahụ. Ha kwesịrị ime ka ịhụnanya ha sie nnọọ ike site n’ịtụkwasị ibe ha obi, onye nke ọ bụla ana-akwanyekwara ibe ya ùgwù n’achọghị ọdịmma onwe ya naanị. (Ilu 31:11; Malakaị 2:14, 15; Ndị Efesọs 5:28, 33) Ime ihe ndị a ga-enye aka mee ka ị ghara iwere obi gị nye onye ọzọ ma ọ bụ chewe otú gị na onye ọzọ na-abụghị di ma ọ bụ nwunye gị ga-esi nwee mmekọahụ, bụ́kwa ihe nwere ike itisa gị na di ma ọ bụ nwunye gị.
^ par. 11 Ma ọ dị mkpa iburu n’obi na naanị ihe Akwụkwọ Nsọ kwadoro nwere ike ime ka mmadụ gbaa di ma ọ bụ nwunye ya alụkwaghịm bụ mgbe ọ kwara iko.—Matiu 19:9.
^ par. 14 Aha a a kpọrọ ha abụghị ezigbo aha ha.
▪ Di ma ọ bụ nwunye ịnọ na-eche obi ụtọ ọ ga-enwe ma ya na onye ọzọ nwee mmekọahụ, ò nwere ike ime ka ọ kwaa iko?—Jems 1:14, 15.
▪ Gị na nwoke ma ọ bụ nwaanyị ọzọ ịkpachi anya, ò nwere ike ibute nsogbu n’etiti gị na di ma ọ bụ nwunye gị?—Jeremaya 7:9; Matiu 15:19.
▪ Olee otú i nwere ike isi mee ka gị na di ma ọ bụ nwunye gị dịrịkwuo ná mma? —1 Ndị Kọrịnt 7:4; 13:8; Ndị Efesọs 5:28, 33.
“Onye ọ bụla nke na-ele nwaanyị anya, o wee gụọ ya agụụ ka ya na ya nwee mmekọahụ, ọ kwasowo ya iko n’obi ya.”—Matiu 5:28
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Gịnị n’Ezie Ka Di Ma Ọ Bụ Nwunye Ịghara Ịgba n’Èzí Pụtara?